Ngwurugwu | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Nkọwa nke ụdị mkpụrụ vaịn "Mgbanwe"
Ka ọ dị ugbu a, a na-agbazi ọtụtụ mkpụrụ vaịn na ha nile nwere uru ụfọdụ, nke ha na-enweta ịhụnanya nke ndị na-elekọta ubi. N'ime ụdị ọhụrụ ndị a na-abanyebeghị na nchịkọta ala nke mkpụrụ vaịn, "Ngbanwe" bụ ihe a ma ama. Ihe bara uru dị ukwuu bụ ike ime ka ihe dị mma ma dị elu ọ bụghị nanị n'ógbè Southern, kama na mpaghara ndị nwere ihu igwe.
Mkpụrụ vaịn "Laura"
Mkpụrụ vaịn dị iche iche a na-akpọ "Laura" abụwo ọkacha mmasị nke ọtụtụ ndị na-agba viticulture. Utu ya mara nma ma gwa ha ka ewepu ha n'osisi ohia wee gbalita ozugbo. "Laura" bụ otu n'ime ụdị mkpụrụ vaịn amber, bụ nke a na-ahụkarị na ụlọ ahịa na ụlọ ezumike.
Mkpụrụ vaịn "Moldova"
N'etiti ndị nwere mmasị na mkpụrụ vaịn na-atọ ụtọ, ma eleghị anya, ọ gaghị enwe ndị na-anụbeghị banyere Moldova dị iche iche. Mkpụrụ vaịn a bụ nanị eluigwe na ụwa, nke ọ na-atọ ụtọ nke ndị na-eto eto na-amakarị. Ọ nwere nnukwu nguzogide na nlekọta na-adịghị mma. N'agbanyeghi na ihe di iche iche enweghi oke ohia na tomato, o ka na-adọta uche gaa n'ubi ya di iche iche.
Mkpụrụ vaịn "Libya"
Mkpụrụ vaịn bụ ezigbo uru ma na-atọ ụtọ beri. Ọzọkwa, n'etiti iche iche ị nwere ike ịchọta ụdị dịgasị iche iche ọ bụghị nanị na-amasị, ma nha, nhazi na agba. Ma maka ọtụtụ winegrowers, ihe kacha mkpa bụ oge ripening nke mkpụrụ vaịn. Nke a dị mkpa karịsịa maka ógbè nwere ihu igwe dị jụụ, ebe ụdị dị iche iche nwere ike ọ gaghị enwe oge iji too ogo.
Mkpụrụ vine "dị iche iche"
E nwere ọtụtụ ụdị mkpụrụ vaịn nwere nnukwu bunches na tomato. Ọbụna n'ọtụtụ dị iche iche nwere ike, ụfọdụ ndị na-arụ ọrụ nke ọma na-enwe ike inweta ihe ịga nke ọma na-enwetụbeghị ụdị ya. Ma, n'ihe banyere ụdị mkpụrụ vaịn nke Mbụ, mgbalị ndị pụrụ iche agaghị adị mkpa. A sị ka e kwuwe, ọ bụ ezie na ụdị ụyọkọ mkpụrụ vaịn dị ọtụtụ, mkpụrụ vaịn nke mkpụrụ vaịn a na-eme ihe dị nnọọ ukwuu.
Mkpụrụ vaịn dị iche iche "Kadinal"
N'ebe ndịda nke Ukraine na Russia n'oge a, a na-ewere viticulture dị ka otu n'ime ihe ubi ugbo oge ochie. Eleghị anya ekele maka nke a, taa, osisi a nke Chi dị iche iche aghọwo ihe bara uru na-eto eto na onye ọ bụla. N'ezie, o siri ike ịchọta atụmatụ nzuzo, ọ bụghị osisi vine gụrụ ya mma.
Ọkwa nke mkpụrụ vaịn "Isabella"
Mgbe ụfọdụ, o yiri ka ịgha mkpụrụ ubi-vine abụghị nnukwu ihe, n'ihi na ọ bụ ọdịbendị na-enweghị atụ. Mana, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmị ike nke mkpụrụ vaịn, ọ dị gị mkpa ịmara ụfọdụ ọnọdụ nke ịkụ na ịzụkọta ha. Mkpụrụ vaịn nke "Isabella" abụghị naanị ihe tọrọ ụtọ, ma mara ezigbo mma.
Mkpụrụ vaịn "Amur"
Mkpụrụ vaịn aghọwo ihe onwunwe nke ọ bụghị nanị na ubi vaịn ndịda, kamakwa ebe ndị mmadụ na-anọkarị na oyi na-atụ oyi nke Northern Russia. Ma, ọtụtụ ndị na-eju anya na e nwere ụdị ihe dị iche iche nke ndị ọkà mmụta sayensị chọpụtarala, a na-ejikwa ha eme ihe ugbu a na ịzụlite dị ka ndị nyere onyinye dị elu.
Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Lydia"
Ụdị vaịn ndị a ma ama kacha mma a na-eji emepụta mmanya bụ "Isabella" na "Lydia". N'otu oge ahụ, ọkwa nke abụọ na-adịkarị na ndò, n'ihi na o nwere ọtụtụ nha nhata na Isabella, ha na-akpọkarị ya "Pink" ma ọ bụ "Red Isabella." Ma, mkpụrụ vaịn "Lydia" nwere àgwà pụrụ iche ya, nke ọ na-enwe mmasị na ọtụtụ ndị na-aṅụ mmanya dị ka onye na-amakarị nakwa dị ka mkpụrụ vaịn maka iji tebụl eme ihe, na dị ka osisi na-edozi ahụ.
Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Ataman"
Mkpụrụ vaịn ụbọchị ndị a akwụsịla ịghọ ihe mara mma ma ọ bụ na-enweghị ike ịgụta. E nwere ọtụtụ ụdị nke osisi a, nke dị iche na ibe ya, ma n'ọdịdị na uto. Otu n'ime ha bụ Ataman. Ka anyi kwue banyere ya karia. Nkọwa mkpụrụ osisi Ataman Nke a bụ nsonaazụ nke onye na-amu amu ozuzu, ngwakọ a nwetara site na ịgafe ụdị Rizamat na Talisman.
Ụka mkpụrụ vaịn "Anyuta"
Ọtụtụ n'ime anyị nwere ọchịchọ dị ukwuu ga-eto n'ubi dị iche iche a na-akọ n'ubi anyị n'oge okpomọkụ. Otú ọ dị, mgbe mgbe anyị na-enweghị ike ịhapụ oge zuru ezu iji lekọta ha. Nhọrọ kachasị mma na nke a bụ nhọrọ nke ụdị, nke dị otu ihe ahụ ma ọ chọghị ka anya dị ukwuu.
Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Veles"
Ndị chọrọ ịmalite na-eto eto n'ụlọ ma ọ bụ n'ubi mkpụrụ vaịn na-ejikarị oge dị ukwuu achọta ụdị dị iche iche maka onwe ha. Ha na-eme ya maka ihe kpatara ya: ọ ka mma iji oge nyochaa ohere Ịntanetị karịa ịkụ osisi mbụ ma mgbe afọ ole na ole gachara. N'okpuru ebe a, anyị chọrọ ịmara gị nke ọma na otu n'ime mkpụrụ osisi vaịn kachasị mma ma na-arụpụta ihe, nke bụ ezigbo maka na-eto eto na ụlọ - mkpụrụ vaịn mkpụrụ vaịn.
N'agbanyeghị ụdị mkpụrụ vaịn dịgasị iche, nke ọ bụla n'ime ha nwere nke ya. Nke a na-emetụtakwa njirimara nke uto nke osisi vaịn ahụ, na nkwụsị ya megide pests dị iche iche, na, n'ezie, àgwà nke fruiting. N'ihi nnukwu ụdị mkpụrụ vaịn, onye ọ bụla nwere ike ịhọrọ kpọmkwem ihe mara mma n'anya ya.
Mkpụrụ vaịn "Na ebe nchekwa nke Negrulya"
Mkpụrụ osisi vaịn kachasị ewu ewu, n'etiti oge dị iche iche nke oge a, nwere ike ịsị na ọ bụ Memory nke Negrul mkpụrụ vaịn. Ọ na-eri nri site na ụzọ nhọrọ, na Moldova, site na-agafe abụọ iche: Moldavian na ngwakọ dịgasị iche iche Pieppel. Ọdịiche Nkọwa mkpụrụ vaịn na ebe nchekwa nke Negrul bụ nri dị ụtọ dị iche iche.
Mkpụrụ vaịn "Victoria"
N'agbanyegh i ot 'u ihe di iche iche nke osisi vine nwere ike isi na-eto eto n' on od u mba any i, ma obu, onye ob ula n'ime any i nwere anu ulo any i. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-amị mkpụrụ osisi na-acha mkpụrụ vaịn, na-ahọrọ ụdị mkpụrụ vaịn na-acha mkpụrụ vaịn na-achọ ịmịlite nnukwu ụyọkọ, na-enwere onwe ịhọrọ mkpụrụ vaịn Victoria.
Ọkwa nke mkpụrụ vaịn "Aleshenkin"
Ụdị mkpụrụ vaịn nke okpokoro dị iche iche dị iche iche site n'inwe uto magburu onwe ya. Ọ gaghị ekwe omume ịfefe mfri eke mfri eke mfri eke ke mîbịghike beri ke inua. Na amber agba na uto uto nke nnukwu tomato nke "Alyosha" agaghị ahapụ onye ọ bụla na-enweghị mmasị. E nwere ike ịchọta mkpụrụ vaịn "Aleshenkin" n'okpuru aha "Alyosha" ma ọ bụ "Mba 328".
Mkpụrụ vaịn "Halachi"
Ọ dịwo anya a maara omenala greepu maka ọgwụgwọ na uru bara uru. Tụkwasị na nke ahụ, osisi vaịn ya mara mma n'oge okpomọkụ na-enye jụụ dị mma ma na-enye aka mee ka udo na nkasi obi dị nso n'ụlọ ahụ. Iji mee ka mkpụrụ osisi vaịn mara mma ma mara mma, ọ dị mkpa iji chọpụta ụdị dị iche iche, nke bụ ebe kachasị mma.
Mkpụrụ vaịn "Mma"
Ịhọrọ mkpụrụ vaịn mbụ maka dacha Lelee "Mma", o nwere ezigbo shuga na shuga na-esi ísì ụtọ, ihe ụtọ ahụ dịkwa mma! Mkpụrụ vaịn "Nwanyị Mara Mma" Mkpụrụ vaịn dịgasị iche iche "Nwanyị Nwanyị" bụ onye a ma ama bụ onye na-azụ ewu bụ Yevgeny Pavlovsky. Mkpụrụ vaịn a bụ nke onye na-amu amu, ebe ọ bụ na ọ bụghị ụdị dịgasị iche iche ka a na-eji agbapụta, ma ụdị mkpụrụ osisi.
Rizamat grape dịgasị iche iche
Kwa afọ, n'ihi mgbalị nke ndị ịzụlite, ọtụtụ mkpụrụ vaịn na-apụta. Nke a dị mma, ebe ọ bụ na ndị ọkà mmụta sayensị nke oge a na - agbalịrị imeziwanye iguzogide nke osisi a, na - ekepụta "oke-iche." O bu ihe nwute, ma na agbụrụ maka nkwado, àgwà nke mkpụrụ vaịn, karịsịa ọdịdị nke ụyọkọ ahụ, na-ahapụkarị uche.
Mkpụrụ nke mkpụrụ vaịn "Sofia"
Ọ na-adọrọ mmasị mgbe niile ịmara ụdị mkpụrụ vaịn ọhụrụ; ozugbo ahụ, enwere ọchịchọ ịkụ mkpụrụ osisi a n'ọhịa nke ya. Ọtụtụ winegrowers na-amị amị na-amalite ịmepụta ikike ha na imepụta site na ịmepụta ụdị ihe ndị dị iche iche na nke ha. N'ezie, ọ bụghị ọtụtụ mmadụ na-eme nke ọma na nke a, ma e nwere ndị ahụ hụrụ n'anya na-ede aha ha n'akwụkwọ ruo mgbe ebighị ebi na akwụkwọ nkà ihe ọmụma gbasara viticulture.
Mmeputakwa nke osisi laurel, esi akụ na-eto eto
Kedu ihe na-emebi ọnyá nwere ike imerụ onye na ndị ọzọ nọ n'ụlọ, gịnị dị egwu na otu esi emeso ha?
Ihe ime ma ọ bụrụ na tomato curl epupụta
Anyị na-eji ihe ndị na-akpali akpali iji mee ka ọ dịrị ngwa ngwa
Ntak emi mmiri ara ehi na-agbago ma ọ bụ na ọ gaghị agbago elu